Izizathu ezi-3 Zokuqasha Inkampani Yenkampani Yezokuxhumana | Martech Zone
NgoMsombuluko, Septemba 21, 2009 NgoLwesithathu, Januwari 29, 2014 UChris Lucas
Endimeni yami kuI-Formstack , A umakhi wefomu online, omunye wemisebenzi yami ukusebenzisa ubudlelwano bomphakathi (i-PR) futhi ikakhulukazi ukusakazwa kwemidiya, okushayela ukuvezwa nokushayela ukuthengisa.
Ukuba nesipiliyoni kokubili ohlangothini lwe-ejensi neklayenti ngiyaqonda ukuthi yini a ifemu enhle yezobudlelwano bomphakathi ungenza inhlangano. Nazi izizathu ezintathu, ngokusuka kokuhlangenwe nakho kwami, kungani amabhizinisi, futhi ikakhulukazi amabhizinisi amancane, kufanele aqashe inkampani engaphandle ye-PR.
Awunaso Isikhathi Sokwenza PR: I-PR akuyona i-spigot ongayivula futhi uyivale. Njengeminye nje imisebenzi yokumaketha, i-PR engaguquguquki, enamasu, futhi elinganisekayo yinto edinga ukuhlelelwa futhi yenziwe isikhathi eside. Njengokuthi awukwazi ukuvula i-SEO, i-PR yinto eqina kuphela njengoba ufaka amandla amaningi kuyo.
Ukukhulisa Ukwethulwa: Amabhizinisi amaningi ayaqonda ukuthi kubaluleke kangakanani ukwethula umkhiqizo noma insizakalo entsha empumelelweni yebhizinisi lakho. I-PR ingaphezu nje kokubhala ukukhishwa kwabezindaba nokuyibeka ngaphezulu kwensizakalo yocingo. Ukuba nomlingani ongakhulisa ubudlelwano bezindaba, imithombo yezokuxhumana, imicimbi, amathuba emiklomelo neminye imisebenzi ehlobene ne-PR ngokuhlangana nokukhishwa okukhulu kungakunika umlenze njengoba wethula umkhiqizo wakho. Kepha khumbula nje, njengoba ngishilo ephuzwini 1. I-PR akuyona into yokuyicisha nokuyicisha.Uma uhlela ukusebenzisa i-ejensi yangaphandle ukwethulwa kwakho udinga ukuqiniseka ukuthi unohlelo olukhona lapho ukwethulwa sekuphelile qhubeka nawo wonke amandla nomfutho owakhile. Into ebi kakhulu inkampani engayenza ukwethula umkhiqizo omkhulu, ube ne-PR enkulu, bese uyaphela ngaphandle kokukhulisa lokho wena ne-ejensi yakho enikuchithe izinyanga nithuthukisa.
Ukuvuselela umkhiqizo noma isevisi: Kwesinye isikhathi ngisho nama-mavens amahle kakhulu asendlini angaphelelwa yimibono emihle. Njengakwi-re-brand noma iwebhusayithi kabusha eletha i-ejensi yangaphandle yokuvuselela i-PR yakho ingakhokha izinzuzo ezinkulu. Ama-ejensi amahle we-PR ayazi ukuthi angabheka kanjani umkhiqizo, insizakalo, noma inkampani futhi abone okuthile okusha - okuthile okufanelekile. Okuthile ocabanga ukuthi kufile noma kukhathele kungasheshe kuthathwe kumakethe entsha noma esitolo esisha futhi kutholakale imilenze ngokushesha. Kusetshenziswa ifemu ye-PR engashayela ngokushesha oxhumana nabo futhi ivivinye imibono emisha ingaba ngumkhiqizo noma ibhizinisi elibunayo. Khumbula kepha, ngisho ne-PR enhle kakhulu ayikwazi ukuvuselela umkhiqizo ofayo, qiniseka ukuthi kukhona okuthile lapho futhi uthembeke kwi-ejensi yakho mayelana nempumelelo nokwehluleka ukuze bakwazi ukuhlinzeka ngamasu afanele.
Futhi njengebhonasi nasi esinye isizathu sokuqasha i-ejensi yangaphandle.
4. Usemakethe Eminyene: Amabhizinisi amancane azama ukuncintisana ezimakethe ezinkulu, ezisunguliwe, noma eziminyene angabona izinzuzo ezithile ezinhle ngokuqasha inkampani yangaphandle ye-PR. I-ejensi enhle izokwazi ukwenza isu lokuthi igxila emandleni enkampani yakho nakwabahlukanisi abakwenza ugqame. Izikhathi eziningi i-ejensi ingakusiza ungene ngomsindo futhi ufinyelele emakethe oyifunayo ngokushesha.
Lezi akuzona kuphela izizathu zokuthi kungani inhlangano kufanele iqashe i-ejensi ye-PR kepha lezi ezinye zezizathu engizibonile ngombono weklayenti ne-ejensi ukuqasha usizo lwangaphandle lwe-PR.
Tags: umabhebhanaprezimayelana Nomphakathi
Ukuhlanganisa izinkinobho ze-Retweet kubhulogi lakho le-WordPress
Sep 22, 2009 ku-2: 20 AM
Amafemu e-PR ayamangalisa. Kepha kufanele uqonde i-PR ngaphambi kokuthi uphishekele la maqembu.
Bheka le ndatshana: http://www.paulgraham.com/submarine.html
Futhi bukela le vidiyo emnandi:
Sep 22, 2009 ngo-12: 27 PM
Wonke amaphuzu amahle. Iningi lamabhizinisi amancane awanayo imali yokwenza lokhu. Kepha njengoba usungenhla,
imizamo idinga ukungaguquguquki, amasu, futhi ikalwe.
Kungokufanayo nangokukhangisa. Ngibona osomabhizinisi abancane bekwenza amahlandla ambalwa bese bekhala ngokuthi ukukhangisa akusebenzi.
Uma ibhizinisi likhetha ukuzenzela ngokwalo, ukhiye awucimi i-spigot. Njengoba nje ukhipha okhaphethi bakho nsuku zonke, ushanela imigwaqo ephambi kwesitolo sakho, lokhu kuyinto edinga ukunakwa njalo.
Okthoba 28, 2009 ngo-2: 33 AM
Iyimali engcono kakhulu ongayisebenzisa ukuze uzimisele ngokuthengisa kwakho. Ungabhampa ngokulandela amathuba ngaso sonke isikhathi, kepha imvamisa awunaso isabelomali sokuwahlanganisa wonke ngempumelelo. Thola amandla akho futhi uthole izeluleko ezifanele futhi wakhe ukusuka lapho. I-athikili enhle
I-Chicago PR Firm
Dec 20, 2011 ngo-12: 44 PM
Unamaphuzu amahle lapha - okuthunyelwe okuhle!
Jan 10, 2012 ku-8: 13 AM
Ngicabanga ukuthi ngingavumelana nabo bonke laba Chris. Esinye isizathu ukuthi utshelwe, 'cha' uma unombono omubi. Uma ngabe i-ejensi ye-PR yezobuchwepheshe izimele ngokwanele izokwazi ukusho uma icabanga ukuthi omunye wemibono yakho ngeke usebenze futhi kufanele ube nesibindi sokukutshela.
Ngicabanga ukuthi akusho ukuthi kufanele babe nobuciko obanele bokuza nemibono nabo!
I-Oct 5, i-2017 ku-2: i-23 PM
Kuyathakazelisa ukufunda ukuthi uma kukhulunywa ngebhizinisi elifuna ukuqasha inkampani yezobudlelwano bomphakathi ukuthi kunezinzuzo ezingazithola zisebenzisa eyodwa. Ngiyayithanda indlela osho ngayo ukuthi lokhu kuzobasiza ukuthi bakhulise ukwethulwa kwebhizinisi labo noma yimuphi umkhiqizo omusha abafuna ukuwuthengisa. Lokhu yinto okufanele bayikhumbule ukuze bezokwazi ukuba nabathile abazosebenzisana nabezindaba ngazo zonke izindlela.